Nyi Nyi Naing သည် ဇွန် 2, 2011 က 9:28amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
မေတ္တာကနေရာတကာမှာအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းတဲယအလုပ်ကုသိုလ်ရေးမှာလည်း မေတ္တာအရင်းခံပြီးလုပ်ပါမှကြာရှည်ခံပါတယ်။မေတ္တာအရင်းမခံထားရင် ကောင်းတဲ.အလုပ်ဖြစ်ပေမယ်. အတိုက်အခိုက်တွေ၊လောကဓံတွေကြုံလာရင် သည်းမခံနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မေတ္တာအရင်းခံပြီးလုပ်မှကြာကြာခံပါလိမ်.မယ်။နေ.စဉ်လည်းပို.ကြပါ။ပို.တဲ.အခါ ဘုရားဟောခဲ.တဲ. မိခင်ကတစ်ဦးတည်းသောသားအပေါ်မှာထားတဲ. မေတ္တာမျိုး(သူ.အကျိုးလိုလားတဲ.စိတ်)စိတ်ကိုMood သွင်းပြီးမှပို.ကြပါ။ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်ပဲ မေတ္တာကိုအချိန်ရသလောက်ပို.ကြပါ။
A BuddhismworldAdmin သည် ဇွန် 2, 2011 က 2:01amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။